Naya Bikalpa | प्रधानमन्त्री ओलीकाे असंवैधानिक कदम सर्वाेच्चले उल्ट्याई दिनेछ ! - Naya Bikalpa प्रधानमन्त्री ओलीकाे असंवैधानिक कदम सर्वाेच्चले उल्ट्याई दिनेछ ! - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७७ फाल्गुन ७, १४: ११: २९
काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएकी नेतृ हुन् कमला पन्त । उनी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । उनले सांसद र मन्त्रीको अनुभव बटुलीसकेकी छन् । उनको जन्म गोरखाको सामान्य किसान परिवार भएको हो । निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्ने उनी निडर नेता र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छिन् ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक विरुद्ध खरो उत्रने पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तसँग नयाँविकल्पका लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर ठहर ग¥यो । त्यहीं अनुरुप प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध देशैभरि विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु भए । म पनि आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र केन्द्र विभिन्न विरोधका कार्यक्रममा व्यस्त छु ।
सत्तापक्ष नै विभिन्न रुपले सडकमा आन्दोलित छन्, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस के हेरेर बसेको छ ?
यो बढो अनौठो छ । यसैलाई भन्छन् ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेर । सत्तापक्ष प्रधानमन्त्री आफै जसले विधि, पद्धति र सिद्धान्त जोगाएर शासनलाई सभ्य ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने हो । उहाँले नै न्यायलय र निर्वाचन आयोगलाई थे्रट गरेर हिड्नुभएको छ । त्यसैले ‘कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्छन् । हाम्रो देशमा यस्तै छ ।
सत्तापक्षबाटै नेपाल बन्द, हड्ताल जस्ता काम हुनथाले कांग्रेस कता छ ?
जथाभावी बन्द, हडताल, तोडफोन गर्न कांग्रेसलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छ र ? हामीले त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गरेका छौं । न्यायलयले आफ्नो काम गर्न पाउनुप¥यो । अपोजिसनका पार्टीहरुले आफ्नो ठाउँमा रहनुप¥यो । प्रतिपक्ष दलले त अहिलेसम्म राज्यलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था हो ।
अहिले जनताको इच्छा भनेको स्थिरता हो । त्यसको लागि राज्यलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ । जब पुस ५ गते संसद् विघटन हुनेबित्तिकै यो कदम अलोकतान्त्रि, असंवैधानिक, अराजनीतिक र अधिनायकवादी कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्णय ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालय बैठक राखेर यो निर्णय गरिसकेपछि हामी विरोधका कार्यक्रम लिएर ग्रास रुटमा पुगेका छौैैं ।
त्यसको लागि ७५३ वटा पालिका, ७७ वटा जिल्ला र ६७४३ वटा वडालगायत क्षेत्रसम्म पुगेर विरोधका कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । त्यसरी नेपाली कांग्रेस जनताको घरदैलोमा पगिरहेको छ ।
त्यसोभए नेपाली कांग्रेस रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम लिएर अगाडि बढने हो ?
नेपाली कांग्रेस सत्ताको बनेको पार्टी होइन । विधि, पद्धति र सिद्धान्तको लागि बनेको हो । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा कहाँ को विचलित भयो । त्यसलाई समयले जवाफ दिन्छ । हाम्रो पार्टीले आधिकारिक रुपमा गरेको निर्णय नै ठीक हो । त्यसै अनुरुप कांग्रेसका सबै तह, तप्का एकजुट भएर यो कदमविरुद्ध क्रियाकलाप गरिरहेका छौं ।
त्यसोभए अहिले जे गरिरहेको छ त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ?
हो, अहिले अहिले केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र वडामा जेजति विरोधका कार्यक्रम भएका छन् । ती नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको आधिकारिक धारणा हो । यो निर्णयका लागि दुई, तीन पटक पार्टीको कार्यसमिति बैठक बसेको हो । त्यसबाट निकालिएको निष्कर्ष हो ।
कांग्रेस जसरी सशक्त ढंगले अगाडि आउनुपर्ने हो, त्यसरी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो स्वाभाविकै हो । अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेका छौं । सर्वोच्चले पक्कै पनि संवैधानिक फैसला दिन्छ । लोमा संघर्षबाट आएको संविधानलाई मर्न दिँदैन भन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ । अब अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले चाहीं हामी यो असंवैधानिक कदम हो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं ।
संवैधानिक हुनलाई संसद् पुनस्थापना हुनुपर्छ ? कांग्रेसको धारणा त्यही हो ?
एकदम सही भन्नुभयो, त्यहीं हो । किनभने संसद् पस्थापना भएपछि हामी आवधिक निर्वाचनमा जान्छौं । एक न एक दिन त निर्वाचनमा जानै छ । यो जनमत जनताले पाँच वर्षको लागि दिएका हुन् । सधैं अस्थिर सरकार भएर नेकपालाई लगभग दुई तिहाई मत जनताले दिएका हुन् ।
उसलाई जनताको मत नपचेको हो । त्यो जनमतलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले साढे दुई वर्षमै लत्याउनुभयो । त्यसैले विधिको शासन जोगाउनको लागि एक मात्र उपाय संसद् पुनस्थापना हो । त्यसको सम्वोधन सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
संसद पुनःस्थापनापछि राष्ट्रिय सरकार बन्छ ?
संसद् त्यस्तो नालायक छर राष्ट्रिय सरकार बन्नलाई । त्यही पुनःस्थापित संसद् सरकार दिन सकिहाल्छ नि । पुनःस्थापनापछि त्यो संसद्ले सरकार दिन्छ । त्यसपछि राजनीति संवैधानिक संसदीय ट्र्याक्टमा आइहाल्छ नि ।
पुनःस्थापित संसद्को चुनावी सरकार बन्ने हो ?
त्यसपछि पनि अधिकारसम्पन्न फुलफेजको सरकार बन्छ । के को चुनावी मात्रै हुन्छ र । अहिले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । दुई वर्षमा एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने त्यसपछि फेरि एक वर्ष थपिन्छ । संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि त्यसबाट फुलफेजको नयाँ सरकार बन्छ । त्यसले आमनिर्वाचन गराउँछ ।
पुनःस्थापित संसदबाट बन्ने सरकारलाई दुई वर्षसम्म कसैले चलाउन सक्दैन ?
आवधिक निर्वाचन हुनलाई लगभग दुई वर्ष बाँकी छ । पहिलाकोसहित चार वर्षपछि आवधिक चुनावमा जानुपर्छ । संवैधानिक ट्र्याक्टमा बनेको सरकारले समय पुगेपछि चुनावमा जान्छ । त्यो नै संवैधानिक कडी हो ।
संसद् पुनःस्थापना पनि भएन, प्रधानमन्त्रीले तोकेको मितिमा चुनाव पनि भएन भने कांग्रेसले के गर्छ ?
यी काम भएनन् भने कांग्रेसले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्छ । त्यसका एजेन्डाहरु चुनावी हुन्छ । चुनावी आन्दोलनआर्फत चुनावमा जानुपर्छ । यसमा मलाई चाहीं के लाग्छ भने, ‘कि सर्वोच्च अदालतले कालो कोट फुकालेर सडकमा राजनीति गर्नुप¥यो’, होइन भने संविधानविपरीत निर्णय कसरी दिन सक्छ र ?
पुनःस्थापना नगर्दा सर्वोच्चको निर्णय पनि असंवैधानिक हुन्छ हो ?
त्यस्तो भएन भने सकडमै आएर राजनीति गरे भइहाल्यो नि । असंवैधानिक निर्णय भयो भने त राजनीति गरेको भइहाल्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदा संविधानबिपरीत दियो भने कालो कोट फुकालेर सकडमा आएर राजनीति गर्दा हुन्छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक फैसला गरेन भने असंवैधानिक काम उसले पनि गरेको ठहरिन्छ नि केपी ओलीले मात्रै गरेको हुन्छ र । त्यसपछि त केपी ओलीले मात्रै गलत गरे भन्छन र सर्वोच्च अदालतले पनि गलत गरेको ठहरिन्छ नि । जनताले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर भनेका थिए र ?
त्यसो भए नेकपाले जनमत थेग्न सकेन हो ?
जनताले राजनीतिक स्थिरताको लागि दिएको जनमत नेकपाले थेग्न नसकेकै हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा ल्याएर मुलुकको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडा त पार्टी मिलाउनुप¥यो नि । त्यो ल्याएर राष्ट्रिय राजनीति नै तहसनहस पार्न पाइँदैन ।
जनमतले नेकपा मात्तिएजस्तै भोलि नेपाली कांग्रेस पनि पुलपुलिएर यसै गर्दैन ?
त्यसरी पुलपुलिनै हुँदैन नि । विधिमा हिंड्नुप¥यो क्या विधि । पहिला त पार्टी विधानअनुसार चल्नुप¥यो । शासनसत्ता संविधान अनुसार चल्नुप¥यो । विधि र पद्धतिहरु छन् नि । त्यो अनुसार पार्टी र सरकार चल्ने हो भने कसैले प्रश्नै गर्दैनन् नि ।
विधि र विधानका कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस त्यसरी चलेको छ, तपाईं पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ?
त्यसैले त हामीले शीर्ष नेतृत्वलाई विधि र विधान अनुसार चल्नुहोस् भनिरहेका छौं । तपाईंले हामीले १६ बुँदे बुझाएको देख्नुभएको छैन ? हामीले पार्टी सभापतिलाई विधि अनुसार चलाउनुहोस् भनेर १६ बुँदे दिइराखेका छौं त । तपाइ विधि र विधान अनुसार चल्नुभएन । त्यसो नगरौं भनेर हाम्रा पार्टी सभापतिलाई भनिराखेका छौं । हाहीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पटक–पटक विधि र विधानका कुरा उठाइराखेका छौं । छलफल र परामर्श गरिराखेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन कहिले हुन्छ त ?
अधिवेशन कहिले हुन्छ भनेर त्यो मिति हामी लालटिन बालेर खोजिराखेका छौं । ठ्याक्कै यहीं दिन र मितिमा हुन्छ भनेर भेटिएको छैन । छिट्टै गर्ने÷गराउने प्रयास भइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिले अलिकति अलमल्याएको अवस्था छ ।
कांग्रेसका भ्रातृ, भगिनी र सुभेच्छुक संस्थाहरु पनि अलमलमा छन् केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी एकदमै पूर्ण रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्ने जरुरी छ । सबै भ्रातृ, भगिनी र सुभेच्छुक संस्थाहरु पनि रुपान्तरण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने छ । अब आगामी महाधिवेशनले यी सबै कुराको पैmसला गर्छ भनेर ढुक्क छौं ।
अबको महाधिवेशनले कांग्रेसलाई एक ढिक्का भएर रचनात्मक र संगठनात्मक ढंगले अगाडि ऊर्जा दिन्छ ?
विधि सम्मत ढंगले हिड्नलाई १४ औं महाधिवेशनले सही बाटो दिन्छ । त्यही बाटोबाट सबै भ्रातृ, भगिनी र सुभेच्छुक संस्थाहरु पनि रचनात्मक र संठनात्मक ढंगले अगाडि बढ्न ऊर्जा पैसा गर्छ ।
युवा नेतृत्वको कुरा खुब चलेको छ नि त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
युवा, बुढा, भर्खरका सबैंको फैसला आगामी १४ औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले दिन्छन् ।
तपाईं जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदा जनताहरु पुनःस्थापन र चुनाव के भन्छन् ?
म जिल्लाका कार्यक्रममा पनि पटक–पटक गइराखेको छु । नेपाली कांग्रेसले सत्ताको लागि होइन । हामी विधिको लागि लडेको हो । सत्ताकै लागि मात्रै भए राणा र पञ्चायतसँग लड्नु पर्ने थिएन । त्यसपछि पनि विधिको लागि नगरेको भए सलेन्डर गरेर ‘म त मितीसँगै मिलेँ’ भनेको भए माओवादी द्वन्द्वको बेलामा त्यति धेरै मान्छेले टाउको काटिएर मर्नुपर्ने थिएन । त्यसमा पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेर लडेको न हो । त्यसैले केही दुई÷चार जना व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थको लागेभन्दैमा सिंगो कांग्रेस विधि छोडेर हिड्दैन ।
नेकपाकै असन्तुष्ट पक्ष हिंसात्मक ढंगले आन्दोलन गर्दा कांग्रेस चुपचाप भयो भन्ने आरोप छ नि ?
नेपाली कांग्रेस मान्छे काट्दै, निर्मम ढंगले हिंसा गर्दै, नेपाल बन्द गर्दै हिड्ने पार्टी होइन । कांग्रेसले रचनात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु गरेको छ । यसको लागि कांग्रेस केन्द्रदेखि गाऊँतहसम्म पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सडकमा जानुप¥यो भने कांग्रेस आफ्नै ढंगले जान्छ ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले तोकेको समयमा चुनाव भएन भने कांग्रेस आक्रामण ढंगले आन्दोलनमा जान्छ ?
संसद् पनःस्थापना पनि भएन, चुनाव पनि भएन भने त बाटो खोज्नुप¥यो । संविधान जोगाउन आन्दोलन गर्नुप¥यो । चार–चारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आउन नसकेको संविधान तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा आएको संविधान बँचाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
पुनःस्थापना कि चुनाव भन्नेमा कांग्रेस एकजुट देखिँदैन नि ?
कसैले कोठामा बसेर निहीत स्वार्थका लागि केही भनेका होलान् । त्यो मलाई थाहा हुँदैन । मलाई थाहा भएको पार्टीले गरेको निर्णय हो । ती कार्यक्रम लिएर म पनि जिल्ला–जिल्लामा गएको छु । ती कार्यक्रममा हामीले पार्टीको आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका छौं । त्यसैलाई मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा भन्ने गरेको छु । जुन निर्णय हामीसहितको केन्द्रीय समिति बसेर गरिएको हो । त्योभन्दाबाहेक व्यक्तिगत सोच र धारणा होलान् ।
कांग्रेसलाई त एक पक्ष पदको लोभ, अर्कोपक्ष भागवण्डामा लागेको आरोप छ नि ?
सत्तापक्षसँग भागबन्डामा लागेको । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन लागेको विषयमा चाहीं मैले कुरा गर्न छैन । राष्ट्रपति हुन लागेको भनेर आरोप लगाइएका वरिष्ठ नेतालाई चाहीं मैले सोधेँ । उहाँले राष्टपतिको लागि पहिला डा. रामवरण दयाव हुने बेलामा पनि मलाई गिरिजाबाबुले मलाई सोध्नुभएको थियो ।
मैले हुन्न भनेको हुँ । त्यसैले अहिले मलाई यो बेकारको आरोप लगाइएको हो । त्यसरी कुरा पनि भएको छैन । म राष्ट्रपति बन्दापनि बन्दिँन भन्नुयभो । तपाईंले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भन्न खोज्नुभएको हो । त्यो कुराको बजार हल्ला हुनेबित्तिकै मैले उहाँलाई सोधेँ । उहाँले होइन भन्नुभयो । अरुका बारेमा कहाँबाट आयो मैले मेरो कानले सुनेको छैन ।
सरकारले गरेका भ्रष्टाचारमा कांग्रेस चुप लाग्यो भन्ने आरोप छ ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो आज बुलन्द बनाएको छ । बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि ओम्नी, यति, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा कांग्रेसले खरो विरोध गरेको हो । त्यो जनताहरुमा जगजाहेरै छ । त्यसैले भ्रष्टाचार हुँदा कांग्रेस चुपलागेर बस्यो भन्ने होइन । नेतृ कमला पन्त नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
२०७७ फाल्गुन ७, १४: ११: २९